यो कुनै पनि उमेर को बच्चाहरु गर्न, काम गर्न आवश्यक छ, तिनीहरूलाई सबै प्रयोग गरेर खेल प्रविधी सिकाउन कुनै गोप्य छ। किन आज म plasticine कार देखि sculpt कसरी बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु कि छ। यो दृश्य को मनोरञ्जन बिन्दु, तर पनि हात को औंलाहरु लागि मात्र होइन सहयोगी हुनेछ। सजावट पछि - ठूलो छ मालिश एक प्रकारको, विकास राम्रो मोटर कौशल मस्तिष्क कक्षहरूको उत्कृष्ट काम गर्न योगदान, बच्चा को हात को।
माटो को प्रकार
तपाईं मुख्य बिन्दु आउन अघि - माटो मिसिन देखि अन्धो मानिस, यो दिइएको सामाग्री, त्यहाँ धेरै प्रकार हो भने कत्ति को कथा। त्यसैले, कान्छो छोराछोरीलाई लागि राम्रो एक घर माटो, नुनीन मुछेको बनेको छ जो तयार छ। यो खाने पनि भने, आफ्नो शरीर गर्न हानि गरेनन्, बच्चालाई सबै को आवश्यक पहिलो हो। विद्यालय र पूर्वप्राथमिक को बच्चाहरु को लागि उमेर जो कुनै पनि स्टेशनरी मा खरिद गर्न सकिन्छ साधारण माटो, प्रयोग गर्न राम्रो छ। मोडेलिंग भएका बच्चाहरु को लागि - आफ्नो मनपर्ने गतिविधि छ, र सोही उत्पादनहरु सुन्दर उत्पादन, र त्यहाँ एक तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्न इच्छा, यो एक विशेष किन्न राम्रो छ - मूर्तिकला माटो, कुन तथापि, काम केहि थप जटिल छ, यसलाई त समय समयमा छ .. सक्छन् ताप चाहिन्छ।
माटो कार बाहिर sculpt कसरी सोचिरहनुभएको अघि, बच्चा को एक परिणाम रूपमा हेर्न चाहन्छ भन्ने आदेश निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यो एक यात्री कार, ट्रक, बस, gonochki हुन सक्छ र यति। अगाडी। अनि त तपाईं आवश्यक सामाग्री चाहेको लेख ढाल्नुहोस् गर्न प्रयास सुरु गर्न।
मिसिन गर्न सुन्दर बाहिर गरिएका, यो plasticine केही रंग लिन राम्रो छ। अब हामी माटो मिसिन-gonochki बाहिर sculpt कसरी बुझ्न। यो गर्न, इच्छित मूल्य गोलो therefrom एक माटो आधार रंग र रोल (मिसिन को आकार निर्भर यस बाट) ले। सही बक्स प्राप्त गर्न ताकि अर्को, चक्कु प्रयोग गरेर गोलो को किनाराको ट्रिम गर्न आवश्यक हुनेछ। यो भन्दा कार को आधार छ। यो कार बाहिर छैन त्यसैले तीव्र-कोणात्मक गरिएका गर्न किनाराको पनि राउण्ड हुन सक्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। plasticine देखि मोल्डिंग मिसिन पनि निम्न चरणमा implies: को पाङ्ग्रा लागि साइट र पाङ्ग्रा आफूलाई सृष्टिको तयारी। यसो गर्न, तपाईं यस्तो बोतल को रूप मा, टोपी लिन सक्छ, र जहाँ पाङ्ग्रा हुन् सुन्दर ठाउँमा माटोले धक्का। टायर मोल्ड गर्न गाह्रो छैन। यसो गर्न, तपाईं चार बराबर आकारको बलमा बनाउन र तिनीहरूलाई अलिकति laterally गर्न उत्पादन वर्तमान समान थियो समतल गर्न आवश्यक छ। सबै छ, जग तयार छ!
कसरी विश्लेषण माटो मा sculpt गर्न मिसिन-gonochki, हामी पनि यसको सजावट, साथै एक बिघ्नकर्ता सिर्जना जस्ता विवरण ध्यान गर्नुपर्छ। यसलाई सिर्जना गर्न, तपाईंले पकड केही मा भाग एक व्यापक समतल भाग र दुई साना साजसज्जा फेशन गर्न आवश्यक हुनेछ। मिसिन को पछिल्लो एक बिघ्नकर्ता संलग्न छ। मेशिन छेउमा वा अगाडि सजावट लागि पट्टी शुरू देखि अहिले सम्भव छ। वा निर्णय यो कार के ब्रान्ड, र त्यसपछि एउटा सानो प्रतिमा फैशन। तपाईं पनि उनको केही तस्वीर कटौती भएको, कार सजाउनु सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले कहिल्यै अरू के तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ थाहा छ। र तपाईंलाई मदत गर्न - कल्पना र कुशल हात।
टोपी Tacora: बुनना कसरी?
कपडा मा चित्रकारी - छीँट
बालक लागि ढाँचा शर्ट। अंगरखा बच्चाहरु: नमूना
नयाँ स्वेटर बुनाई खरिद गर्न - सिद्ध!
कोलेस्ट्रल बिना खाना। खाद्य पदार्थ मा कोलेस्ट्रल सामग्री: तालिका
"Oftalmoferon" - आँखा खस्छ, निर्देशन
ठोस इन्धन बयलर लागि Flues: उपकरणहरू सर्किट र प्रकार
अभिनेता जर्ज Taratorkin: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
सरसफाई - सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिस्टम zhizneobepecheniya छ
मुला को सलाद - वसन्त को गंध